Ny Airbus sy ny manampahefana misahana ny fiaramanidina sivily ao Singapore dia manao sonia MOU
Home » Travel Technology News » Ny Airbus sy ny manampahefana misahana ny fiaramanidina sivily ao Singapore dia manao sonia MOU
Airbus sy ny Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) dia nanao sonia Memorandum of Understanding (MOU) hahafahan'ny fivezivezivezy an-tanàn-dehibe (UAM) any Singapore.
Ny MOU dia nosoniavina androany tao amin'ny Singapore Airshow 2020 teo amin'i Jean-Brice Dumont, filoha lefitra mpanatanteraka, injeniera, Airbus ary Kevin Shum, tale jeneralin'ny Manam-pahefana sivily ao Singapore.
Ny fiaraha-miasa dia mikendry ny hitondra ny serivisy UAM sy ny sehatra ho tena zava-misy eo amin'ny tontolon'ny tanànan'ny Singapore, miaraka amin'ny tanjona hanatsara ny famokarana indostrialy sy hanatsara ny fifandraisan'ny faritra ao amin'ny firenena. Ao anatin'ny fifanarahana:
Airbus ary ny CAAS dia hiara-miasa amin'ny famaritana sy famolavolana serivisy UAM voalohany miaraka amin'ny Unmanned Aircraft System (UAS). Ireo antoko ireo dia hiara-miasa manokana hahatsapa ny rafitra sy serivisy fitantanana ny fifamoivoizana tsy mitantana (UTM) hanohanana ny tranga fampiasana voalohany.
Ho an'ny asan'ny UAM toy izany, ny roa tonta dia hiara-miasa amin'ny fampiroboroboana ny faneken'ny besinimaro, ny fampiroboroboana ny fenitra ary ny fametrahana rafitra fiarovana ilaina.
Farany, Airbus sy CAAS dia handinika ny fahafaha-manao sy ny takiana amin'ny serivisy UAM fanampiny izay misy ny vahaolana amin'ny fitaterana entana sy lozabe.
Ity MOU ity dia mandroso fiaraha-miasa maharitra eo amin'ny Airbus sy CAAS. Fiaraha-miasa teo aloha no naorina voalohany tamin'ny taona 2016 ho an'ny fitsapana U-proof-of-concept ("Skyways"). Airbus sy CAAS avy eo dia nanao sonia fifanarahana niaraka tamin'ny Vondron'Olombelona Eoropeanina momba ny fiarovam-piaramanidina mba hizara sy hampandroso ny fari-pitsipika momba ny asa sy fiarovana ho an'ny UAS amin'ny tontolo an-tanàn-dehibe.
Skyways dia nanomboka ho tetik'asa fanandramana mikendry ny famolavolana rafitra fandefasana rivotra tsy misy olona azo antoka hampiasaina amin'ny tontolo an-tanàn-dehibe. Ny fisedrana porofom-panaporofoana ho an'ny Skyway dia vita soa aman-tsara tamin'ny taona 2019 tamin'ny alàlan'ny fandefasana parsela tao amin'ny campus of the National University of Singapore, ary ny fanaterana ny ampahany 3D vita pirinty sy ny entana azo ampidirina amin'ireo sambo miantsona ao amin'ny Singapore Working Anchorage.
Mandrosoa, ny Skyways UAS dia hampiasaina ho toy ny laboratoara fanandramana manidina hanohizana ireo teknolojia sy foto-kevitra fitsapana, mifantoka voalohany amin'ny fifandraisana sy ny fitetezana, izay singa tena ilaina amin'ny UTM. UTM dia mpanampy lehibe ho an'ny fahitan'ny Airbus ny fivezivezena an-tanàn-dehibe ary manamboatra ny vahaolana amin'ny fitantanana fifamoivoizana nomerika. Ho singa iray manankery ny famelana ny fiaramanidina vaovao, toy ny taxi fiaramanidina sy UAS, hiditra sy hizara ny lanitra soa aman-tsara.
“Manohana ny fampandrosoana mahasoa ny UAM ny CAAS. Izy io dia tafiditra ao anatin'ny vinan'ny Smart Nation, izay tanjonay hitrandrahana tanteraka ny teknolojia hamahana olana, hiatrehana ireo fanamby, ary hampivoatra an'i Singapore ho iray amin'ireo tanàna miavaka indrindra eto an-tany honenana. Izany no antony hikatsahantsika fiaraha-miasa amin'ireo orinasa hanosika ny fetran'ny fampiharana azy ireo. Ny fiaraha-miasa toy izany, ao anatin'izany ny fiaraha-miombon'antoka CAAS-Airbus hatrizay, dia manangana ny fahaizan'i Singapore sy ny fahaizany mamela ny fampiharana UA mandroso, indrindra ny tontolon'ny tanànantsika, "hoy i Shum.
Nanamarika i Dumont tamin'io fotoana io: "Ny Airbus dia tsy mitsahatra mitady fomba hamiliana sisintany vaovao amin'ny fivezivezin'ny rivotra. Faly izahay fa handray ny dingana manaraka miaraka amin'ny CAAS mpiara-miasa efa hatry ny ela, miaraka amin'ny vina iraisana amin'ny fampivelarana ny fivezivezin'ny rivotra an-tanàn-dehibe sy ny rafitra sy serivisy UTM manohana hitondra vahaolana azo antoka sy azo antoka ho an'ny olona. "